फुटसल मार्क्वेट पार्क • DutchtownSTL.org • Dutchtown, सेन्ट लुइस, MO मा आउँछ
फुटसल मार्क्वेट पार्क मा आउँछ
प्रकाशित सेप्टेम्बर 6th, 2021
दुई बर्ष पहिले बनेको एक विचार अन्ततः वास्तविक बनाइन्छ मार्क्वेट पार्क। चाँडै डचटाउन छिमेकी सेन्ट लुइस को शहर मा पहिलो आउटडोर फुटसल अदालत हुनेछ। फिर्ता जुलाई २०१ in मा, स्थानीय फुटबल उत्साही डेनियल फ्लिन, डचटाउन छिमेकी र UMOJA फुटबल क्लब संस्थापक फ्रेड Maboneza, र को सदस्यहरु मार्क्वेट पार्कको सहयोगी समूह Marquette पार्क मनोरन्जन केन्द्र मा भेटियो।
Flynn त्यहाँ समय बिताए पछि यूरोप मा व्यापक रूप मा उपलब्ध फुटसल कोर्ट को अनुभव थियो। "केहि बर्ष पहिले, म UMOJA फुटबल क्लब संग काम गर्न थाले," फ्लिनले भने। "हामी लगातार फुटसल खेल्न को लागी ठाउँहरु खोज्न संघर्ष गर्दछौं। हामीले दृढतापूर्वक महसुस गर्यौं कि फुटबल स्वतन्त्र र सबैको लागी सुलभ हुनुपर्छ, र त्यो सेन्ट लुइस मा एक मोडेल हुन सक्छ।
समूह बिल बिक्सन, सेन्ट लुइस को शहर को लागी एक पूर्व पार्क र मनोरन्जन प्रोग्रामर संग भेट भयो, र के मार्क्वेट पार्क मा एक फुटसल अदालत बनाउन को लागी आवश्यक छ छलफल। जवाफ छिमेकी साझेदारहरु, ऊर्जा को एक धेरै, र समय थियो।
"मार्क्वेट पार्क लामो समय देखि दक्षिण पक्ष मा फुटबल को घर भएको छ, "डचटाउन मेन स्ट्रीट्सका राष्ट्रपति नेट लिन्डसेले भने। "हामी छिमेकी साझेदारहरु संग काम गर्न को लागी पूर्ण लम्बाई फुटबल मैदान मा एक अद्वितीय थप्न को लागी उत्साहित छौं कि त्यो परम्परा जारी राख्न सक्छ र हाम्रा युवाहरुलाई खेल को आनन्द लिन को लागी एक रमाईलो क्षेत्र प्रदान गर्न सक्छौं।"
एक शहर व्यापी साझेदारी
यो सेन्ट लुइस सिटी पार्क विभाग बोर्ड मा उफ्रने पहिलो साथी थियो। पार्कले परियोजना को योजना शुरू गर्न को लागी अगाडी दिए र सडक डिभिजन संग साझेदारी गर्न को लागी मार्क्वेट पार्क फील्ड हाउस को छेउमा अवस्थित र लामो निष्क्रिय भलिबल कोर्ट मा एक नयाँ डामर पिच खन्याउन प्रतिबद्ध छ।
नयाँ मेजर लीग फुटबल टीम संग एक निजी सार्वजनिक साझेदारी को माध्यम बाट सेन्ट लुइस सिटी एससी, डचटाउन मुख्य सडकहरू र Marquette पार्क को सहयोगीहरु, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, STL बनाइयो, रेनेरी निर्माण, McConnell र एसोसिएट्स, र धेरै निजी दाताहरु, परियोजना को शेष टुक्राहरु सँगै आए।
"मार्क्वेट पार्क मा काम धेरै हदसम्म समुदाय संचालित छ, MLS क्लब संग काम सहित," २० औं वार्ड Alderwoman कारा स्पेन्सरले भने। "यस वर्ष हामी मार्क्वेट पार्क पूल मा परिवर्तन सुविधाहरु को हेरफेर र समुदाय को साथ काम गर्न को लागी पहिचान र अर्को बर्ष को लगानी लाई प्राथमिकता दिनेछौं। एक समुदाय मा लगानी गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो जहाँ उनीहरु आफ्नो कर डलर लगानी गर्न को लागी नेतृत्व गर्नु पर्छ।
एक एक को एक प्रकार को डिजाइन
अन्त उत्पादन दक्षिण सेन्ट लुइस को मुटु मा जनता को लागी एक पूर्ण अद्वितीय फुटसल अदालत खुला हुनेछ। अदालत को सम्पूर्णता भित्ता द्वारा डिजाइन गरीएको छ सेन्ट लुइस कलाकार Jayvn सोलोमन। भित्ता कलाकारको आफ्नै शैली, फुटबल क्लब, र डचटाउन छिमेकी को तत्वहरु संगै ल्याउँछ अदालत मा मात्र खेलाडीहरु को लागी एक गतिशील र रंगीन अनुभव सिर्जना गर्न को लागी, तर पार्क को वरपर को सम्पूर्ण पड़ोस।
अन्तिम डिजाइन छनौट गर्नु भन्दा पहिले, मार्क्वेट पार्क र डचटाउन दक्षिण सामुदायिक निगम को सहयोगीहरु संग काम गर्ने समुदायका सदस्यहरु भित्ताको तत्वहरुमा तौल गर्न सक्षम थिए।
लक्ष्य, कस्टम मेड STL द्वारा निर्मित, दुबै सेन्ट लुइस सिटी एससी र डचटाउन छिमेकी को लोगो सुविधा। लक्ष्यहरु लचिलो धातु बाट बनेको जाल र मौसम र उपयोग बाट आँसु को प्रतिरोध गर्न को लागी छ।
Marquette पार्क योजना को भाग
फुटसल अदालत Marquette पार्क को लागी एक समग्र योजना को पूरा पछि पहिलो प्रमुख परियोजना हुनेछ। योजना पूर्व संग साझेदारी मा भेला भएको थियो PGAV योजनाकारहरू इंटर्न र वाशिंगटन विश्वविद्यालय विद्यार्थी टिफनी Dockins। Dockins अब डचटाउन दक्षिण समुदाय निगम संग दुबै पार्क योजना र को कार्यान्वयन गर्न को लागी काम गरीरहेको छ ग्रीन स्कूलयार्ड पहल Froebel प्राथमिक विद्यालय मा।
"एक युवा डिजाइनर को नजर मा, मार्क्वेट पार्क मा न्यायोचित उचाइ को लागी धेरै क्षमता छ तर त्यसो गर्न को लागी मात्र लगानी को आवश्यकता छ," डकिन्सले भने। "बासिन्दाहरु र सामुदायिक साझेदारहरु बाट निर्णय, मँ उच्च आशा छ कि Marquette पार्क विकसित गर्न को लागी जारी रहन्छ र ध्यान साँच्चै योग्य छ।"
त्यसैले ... Futsal के हो?
Futsal उरुग्वे मा उत्पन्न भएको फुटबल को एक स्केल डाउन संस्करण को समान छ, दक्षिण अमेरिका भर मा लोकप्रियता हासिल गरीयो, र छिटो बिश्व भर मा विस्तार हुँदैछ। प्राय घर भित्र पनी खेलीन्छ, खेल एक कठिन सतह संग एक सानो पिच मा खेलीन्छ र कम उछाल संग एक सानो, बलियो बल को उपयोग गर्दछ। फुटसल खेल एक टीम को पाँच खेलाडीहरु संग खेलेका छन्, र खेलहरु दुई २० मिनेट आधा मिलेर बनेको छ।
Marquette पार्क फुटसल कोर्ट भव्य उद्घाटन
नयाँ फुटसल अदालत सेप्टेम्बर को शुरु मा खेल को लागी तयार हुनेछ। सेन्ट लुइस सिटी एससी शनिवार, सेप्टेम्बर 25 मा छिमेकी भित्र उपलब्धि मनाउन साझेदारहरु संग सहयोग मा एक किक-अफ कार्यक्रम होस्ट गर्ने योजना छ। भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउन क्यालेन्डर वा हामीलाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र twitter यो घटना र आगामी को बारे मा अधिक जानकारी को लागी Marquette पार्क समाचार.
तल दायर गरिएको मार्क्वेट पार्क. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन, डचटाउन मुख्य सडकहरू, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, र मार्क्वेट पार्क. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो सेप्टेम्बर 6th, 2021 .
डचटाउन STL.org मार्क्वेट पार्क फुटसल मार्क्वेट पार्क मा आउँछ